Darpan Nepal – पेटको बोसो घटाउने पाँच प्रभावकारी तरिका जसलाई बैज्ञानिकले पनि सही मान्छन्
पेटको बोसो घटाउने पाँच प्रभावकारी तरिका जसलाई बैज्ञानिकले पनि सही मान्छन्
पेट वरिपरी जमेको बोसोले धेरैजसो तपाईंलाई अप्ठेरो महसुस गराउँछ । आज हामी तपाईंलाई यस्तो सजिलो टिप्सबारे जानकारी दिँदैछौं जसबाट तपाईंले निकै सजिलै आफ्नो पेटको बोसो घटाउन सक्नुहुन्छ । वैज्ञानिकको अध्ययनले पनि यो कुरालाई पुष्टि गरिसकेको छ ।
१. फाइबरको सेवन गर्नुहोस्ः
घुलनशील फाइबर तोल कम गर्नका लागि निकै राम्रो माध्यम हो । यसले आन्द्रालाई स्वस्थ राख्छ । अध्ययन अनुसार यस्तो प्रकारको फाइबरले तपाईंलाई पेट भरिएको महसुस गराएर तपाईंको तौल घटनाउन सहयोग गर्छ । फाइबरले तपाईंको शरिरको भोजनबाट अवशोषित क्यालोरीको संख्या कम गर्ने गर्छ ।
२. जुसको साटो फलफूल खानुहोस्ः
यद्यपी, फलको रस भिटामिन र खनिज प्रदान गर्छ तर यसले शरिरमा सोडा र सुगरको मात्रा पनि बढाउने गर्छ । अत्यधिक मात्रामा फलफूलको जुस सेवन गर्दा यसको बोसो बढाउँछ । यसको साटो दैनिक तपाईं विभिन्न प्रकारको फलको सेवन गर्न सक्नुहुन्छ ।
३. एरोबिक व्यायाम गर्नुहोस्ः
एरोबिक व्यायाम (कार्डियो) ले तपाईंको स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउन र क्यालोरी घटाउने एक प्रभावकारी तरिका हो । अध्ययनका अनुसार एरोबिक व्यायामले पेटको बोसोलाई कम गर्नका लागि व्यायामको सबैभन्दा प्रभावकारी रुप मध्येको एक हो ।
४. तनाव कम गर्नुहोस्ः
यो तौल घटाउने एक सजिलो तरिका हो । निन्द्रा एक महत्वपूर्ण कारक हो जसले तपाईंको तौल कम गर्न सहयोग गर्छ । उचित निन्द्राबाट वञ्चित हुँदा तपाईंको मेटाबोलिजम स्लो हुने गर्छ । त्यसकारण तपाईं असामयिक स्न्याक्स खाने गर्नुहुन्छ । किनभने यसले तपाईंको शरिरको प्रतिरक्षा प्रणाली (इम्युन सिस्टम) को मर्मत र पुनर्स्थापित गर्ने समय पाउँछ । हुन त निन्द्राको कमीले तपाईंको तौल बढाउने गर्छ भने धेरै सुत्दा पनि तपाईंको मेटाबोलिजमलाई स्लो गरेर तपाईंको तौल बढ्ने गर्छ ।
मद्यपानको सेवन नगरेकै राम्रो । यदि तपाईं अत्यधिक पिउनुहुन्छ भने यसले गम्भीर रुपमा स्वास्थ्यलाई क्षती पुर्याउँछ । अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ कि अत्यधिक रक्सीले तपाईंको पेटको बोसोलाई बढाउने काम गर्छ ।
Previous Postमृगौलाको रोग र पत्थरीबाट बच्न चाहनुहुन्छ भने दैनिक गर्नुहोस् यो एक काम Next Postअब पाइपलाइनबाट पुग्छ घरघरमा ग्यास